The chitima kuburikidza muEurope rwendo kunotanga muVienna, guta guru Austria. Mazuva maviri runobwinya ushingi Mirira. Baroque streetscapes uye Imperial dzoushe kuisa matauriro kuti showcase zvinoyevedza, mapurani, tsika nemagariro, uye zvemimhanzi zvakagadzirwa. Izvi pamwe yaro wakagodora kofi-imba tsika uye vakagwinya magadzirirwo zvatinoona.
Zvikomo vari vapenyu Salzburg. Zvakanga kamwe kushandiswa sezvo filming nzvimbo nokuda zvikuru acclaimed, “Ruzha rweMimhanzi” uye pane pfungwa inobatika yehunyanzvi hwekugadzira. Zvinoitawo exudes yakanyarara rwune.
Munich nenharaunda yayo yeBavaria ndipo pane doro uye tsika yekubika yakaumba chikamu chakakosha mutsika yavo, kwemazana emakore vanenge nomwe. The Oktoberfest riri pamusoro pamazita muMunich. It rinopembererwa nemamiriyoni evanhu kuti kushanya kubva pasi pose, kudya vari Kupemberera.
Amsterdam ndiko kuti rwendo pamwe migero zvenhau, iyo hakuzivani, uye kufamba kuburikidza mamiziyamu uye yokukohwa-akazara zvitoro. kunwa, kunodya, uye dhizaini zviitiko zvinonakidza uye zvinonakidza. Amsterdam iguta kushamiswa uye ndiko kumusha Van Gogh miziyamu uyewo boka zvimwe pfuma vanoonekwa.
Berlin uchada mazuva matatu kunyudza. Berlin ine mukurumbira wekuve iye “guta risingambovata”. Tora mukana wayo vibrancy! Usiku dziri mafaro uye mazuva dziri tsika nokunamata.
The nechitima rwendo muEurope kunoguma muPrague, pashure dutu remhepo chishamiso. Prague ndiro guta spiers uye rinowanzoshandiswa zvichienzaniswa kunaka Paris. It zvakare se ari kumba doro zvakanakisisa kuEurope. Nakidzwa chiseko ane 14fung remakore ibwe zambuko, nhare yemakomo, uye rwizi rune usimbe. Ndiyo nzira akakwana kugumisa chitima rwendo kuburikidza Europe.
The yakanakisisa chitima nzendo mu Europe achava nechokwadi muri wakasununguka uye akazorora. Pakunzwisisa girl munzira, kuchengeteka kwekufamba nechitima, nekusvina munzvimbo dzakawanda sezvinobvira. Hapana nani nzira yokufamba. Book pamwe Save A Train nhasi!
Unoda embed yedu Blog romukova “Muchidimbu European By Train In 3 Weeks” pana yako nzvimbo? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feuropean-highlights-by-train%2F%3Flang%3Dsn ‎- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
Rovedza Kufamba Matipi, Travel Europe, Travel Tips